प्रसुती शल्यक्रिया गर्दा चिकित्सकले पेटभित्रै कपडा छाडेपछि…. « Pariwartan Khabar
प्रसुती शल्यक्रिया गर्दा चिकित्सकले पेटभित्रै कपडा छाडेपछि….
6 April, 2021 1:45 pm
काठमाडौं । शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति गराउँदा अस्पतालका चिकित्सकको लापरबाहीका कारण सोलुखुम्बु सल्लेरी निवासी ३० वर्षीया डोमा घताने विश्वकर्माको ज्यान नै जोखिममा परेको छ । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिवार र सामाजिक अभियन्ताहरुले सोलुस्थित फाप्लु अस्पतालका डाक्टर दिलिप कुमार साहको टिमले डोमाको ज्यान जोखिममा पारेको भन्दै कारवाहीको गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले एकजना डाक्टरको लापरवाहीले एउटी आमाको जीवन मृत्युको मुखमा पुगेको भन्दै आफ्नो आमाको रुपमा एकपटक सोच्न आग्रह गरिन् । शहरमा विदेशमा पढेका डाक्टर राख्ने र सरकारले दुरदराजमा नक्कली डाक्टर पठाएको आरोप लगाइन् । डाक्टरलाई पहिला मानव र पछि मात्र आफुलाई डाक्टर सम्झन पनि उनले आग्रह गरिन् । डाक्टरहरुले मानविय मुल्य र मान्यतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
डोमाका श्रीमानले डाक्टरलाई कारवाही र क्षतिपुर्तिको लागि नेपाल मेडिकलमा मुद्दा दर्ता गराएको बताए । उनले भोली स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाने जानकारी दिए । सामाजिक अभियन्ता तथा सगरमाथा आरोही विजय घिमिरेले सोलुको फाप्लु अस्पतालका दिलिप कुमार शाह लगायतका समुहले पेट भित्र नै कपडा राखेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनले घटनामा सम्लग्न सबैलाई कारबाही गर्न माग गरे ।
सुशासनको लागि अभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभागको प्रम्ख जिता बरालले कार्यक्रम संचालन गर्दै डोमाले न्याय नपाएसम्म लडिरहने बताइ्रन् । उनले अस्पतालले विभिन्न समस्या देखाएर जबरजस्ती शल्यक्रिया गराएको समेत आरोप लगाइन् । काठमाडौंको स्तुपा अस्पतालले चार पटक सम्म पेट फुलेको भन्दै भिडियो एक्सरे गर्दै ठिक हुन्छ भन्दै घर पठाएकाले समस्या थप जटिल बनेको उनको भनाई थियो ।
डाक्टर दिलिप कुमार साह
डोमा घताने विश्वकर्मा